ဘယ်လိ်ုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ မွေးမြူကြမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဘယ်လိ်ုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ မွေးမြူကြမလဲ
Posted by manawphyulay on Jul 9, 2013 in Society & Lifestyle |6comments
ဟတ်ထိတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။
ကျုပ်လဲ မကြာခဏ ပလပ် ဖြုတ်တဲ့အကျင့်
ရှိတယ်။ ဆိုပါစို့ ကျုပ်အလုပ်တခုကို တပါတ်လုံး
ငြီးငွေ့လာတယ်။ လက်စသတ်ဖို့ ၂ ရက်လောက်ပဲ လိုတော့
တယ်။ဒါပေမဲ့ အဲအလုပ်ကို နားပစ်တယ်။ဆက်မလုပ်ဘူး။
အဲဒီအလုပ်နဲ့လားလားမှမဆိုင်တဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို
ပျော်ပျော်ပဲ။ အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်လို့(စိတ်)အဆင်ပြေမှ ပြန်လုပ်
ဒါက ကျုပ်ရဲ့ ပလပ်ဖြုတ် တဲ့ အကျင့်လေးပါ။
ဆရာဖေမြင့် ရဲ့စာတွေက်ိုတောင် သတိရသွားသေးးး
ဆိတ်ကို ဓာတ်ခွန်အား ပေးချင်ရင်တော့ အေစီ၊ ဒီစီ ချာဂျင် နှစ်မျိုးထဲက ကြိုက်ရာရွေး.. နေရောင်ခြည်ကနေလည်း အားသွင်းတာ အခုပေါ်နေပီ….
ပျော်ရွှင်၊ တက်ကြွ၊ လန်းဆန်း …
အိုက်ဒါမျိုးဒွေ မဖစ်ချင်ဘူး ..
အေးချမ်း၊ ငြိမ့်ငြိမ့်၊ သိမ့်သိမ့် …
အိုက်ဒါမျိုးဒွေ ဖစ်ချင်ရင်ဂေါ ..
ရှု လေ ရှု။
စိတ် ဆိုတဲ့ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့အရာကို မှီတွယ် နေကြရလို့ …….
စိတ်ကို ထိန်းနိုင်အောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံရှာဖွေရင်း……..
လူ့လောကထဲမှာ ပြဿနာပေါင်းတွေ မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ရှုပ်ထွေးပွေလီနေကြရတာပါပဲ။